ကြှနျမသာလြှငျ မယားအစဈဖွဈပါကွောငျး - ApannPyay Media
” ဒါက ဘယျသှားမလို့လဲ မောငျ ” ” သွျော ထုံးစံအတိုငျး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အာလာပ သလ်လာပ သတငျးခငျြးဖလှယျရအောငျ အာလူးပေးရအောငျပေါ့ကှာ ထှကျလိုကျဦးမလေ ” ” သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဘယျမှာခြိနျးထားလို့လဲ ” ” အုနျးမောငျတို့ အိမျမှာလကှော ” ” မိလဲ လိုကျမယျလေ ” ” အငျ မိက ဘာလို့လိုကျမှာလဲ ”
” အို မောငျက ရုံးအားရကျကလေး တဈရကျတဈလေ အိမျမှာမနတေော့ မိလဲလိုကျခငျြတာပေါ့ မောငျရုံးသှားလဲ အိမျမှာ မိတဈယောကျထဲ မောငျရုံးပိတျတော့လဲ အိမျမှာ မိတဈယောကျထဲ ကွာတော့ အိမျမှာနရေတာ ငွီးငှတေ့ာပေါ့လို့ ” ” ကဲကဲ လိုကျခငျြလဲ လိုကျခဲ့ပါဗြာ မသိပါဘူး ခါတိုငျးတော့ မိကဘယျချေါချေါမရတော့ ဒီကနမှေ့ ထူးထူးဆနျးဆနျးဘာဖွဈတာလဲလို့ ” ” အို နောကျဆို မောငျဘယျသှားသှားလိုကျခဲ့မယျမောငျရဲ့ ချေါသာချေါ ”
အဝတျအစားအပွေးအလှားသှားလဲနတေဲ့ ကြှနျမကိုမောငျကနားမလညျစှာ ပွနျကွညျ့နပေါသညျ။ မောငျနှငျ့ကြှနျမ အိမျထောငျကခြဲ့သညျ့ လေးနှဈတာကာလပတျလုံး ကြှနျမသညျ မောငျနှငျ့အတူအပွငျထှကျခဲလှပါသညျ။
တဈခါတဈရံ ရုပျရှငျနှငျ့ လဟာပွငျဈေးလောကျတှငျသာ အတူသှားလရှေိ့ပါသညျ။ မောငျ့မှာမူ ခွထေောကျတှငျ ဗှပေါသလားဆိုရအောငျအောငျ ခဏလေးမှ အနားမနေ အပွငျသှားနရေမှ ကနြေပျသူဖွဈပါသညျ။
ကြှနျမကလဲ အပွငျထှကျရမှာ ကရိကထမြားလှနျးလို့ မောငျချေါတိုငျး ရှောရှောရှူရှူဘယျတော့မှမလိုကျ။ အိမျအလုပျတှရှေိသေးသညျ။ ဘတျဈကားစီးရမှာ စိတျပကျြသညျ အဝတျအစားကောငျးကောငျးမရှိဘဲ စသညျဖွငျ့အမြိုးမြိုးငွငျးပယျတတျသညျ။ ယခုတော့ ကြှနျမအကွောငျးနှငျ့ကြှနျမမို့ လိုကျမှ လိုကျမှ။
” ကဲ မိရှမေိ အဲ့ဒါကိုအုနျးမောငျတို့အမပေဲ စကားပွောနခြေေ ပငျြးရငျလဲ စာအုပျတှကွေညျ့ မောငျတို့ လကျဖကျရညျဆိုငျသှားလိုကျဦးမယျ ”
အပေါငျးအသငျးနှငျ့တှလြေှ့ငျ မယားပါမတေ့တျသော မောငျက အပွငျထှကျရနျ ဟနျပွငျပါသညျ။ ကိုအုနျးမောငျတို့အမကေလဲ ကြှနျမကိုဖျောရှစှော ဖိတျချေါပါသညျ။
” ဒီက သမီးကို တဈခါမှမမွငျဖူးသေးဘူး ” ” ဟုတျကဲ့ ကြှနျမက ကိုမွငျ့နိုငျ မိနျးမပါ ဒျေါလေး ဟငျးဟငျး ” အပွငျထှကျရနျ ဟနျပွငျနသေော မောငျက ကြှနျမကိုမကျြလုံးတဈခကျြ ဝငျ့ကွညျ့သညျ။ သူနှငျ့အတူလိုကျလာမှတော့ သူ့မိနျးမမှနျးပွောပွ နစေရာမလိုပါပဲ ကြှနျမက မောငျ့မိနျးမပါဟု ပွောနသေညျကို အံ့သွသှားပုံရသညျ။ ကြှနျမကတော့ ကြှနျမရညျရှယျခကျြနှငျ့ ကြှနျမ။
” တနင်ျဂနှလေေး တဈနတေ့ဈလမြေား အိမျမှာနပေါအုနျးလားမောငျရယျ ခုဘယျသှားဦးမလို့လဲ ” ” ကိုစံဝငျးတို့အိမျက ထမငျးစားဖိတျထားလို့ကှ ထမငျးတော့မဟုတျပါဘူး မုနျ့ဟငျးခါး အပြျောခကျြစားကွမှာပါ ” ” အိမျမှာခကျြတဲ့မုနျ့ဟငျးခါးဆိုတော့ စားလို့ကောငျးမှာပဲ သူတို့ကလဲပဲ မောငျတဈယောကျတညျးဖိတျရသလားလို့ ” ” နှဈယောကျစလုံးကိုဖိတျပါတယျကှာ မောငျကမိလိုကျမှာမဟုတျဘူး တဈယောကျထဲပဲလာခဲ့မယျလို့ ပွောခဲ့တာပါ ”
” အိုမောငျကလဲ မိကိုပါဖိတျရငျ မိလိုကျမှာပေါ့လို့ သူတို့အိမျလဲမရောကျတာကွာပွီ သူမိနျးမရပီးမှတဈခါမှ မရောကျလို့ သူ့မိနျးမတောငျ မိကို ကောငျးကောငျးမှတျမိမှာမဟုတျဘူး မင်ျဂလာဆောငျတုနျးကပဲ ခဏမွငျလိုကျရတာ ” ” မိက မိကိုယျမိ မောငျ့မိနျးမမှနျး သိပျသိစခေငျြတယျပေါ့ ” ” အမယျ မဟုတျပါဘူး သူ့ကို မိမမွငျသေးဖူးတာကို ပွောတာပါ ” ” ကဲ လိုကျခငျြရငျလဲမွနျမွနျလုပျခကြှော ” ” ခဏလေးပါ မောငျရဲ့ ခဏလေး ”
သညျတဈခါတော့ တနင်ျဂနှနေမေ့ောငျအပွငျထှကျလြှငျ အသငျ့လိုကျနိုငျရနျ ကွိုတငျရှေးခယျြထားသော အဝတျအစားမြားကို အမွနျဆုံးဝတျပီး ထှကျလာနိုငျသညျ။ သားနှငျ့သမီးတို့မှာ အဘှားဖွဈသူနှငျ့ ဆော့ကစားနကွေသညျ။
သမီးငယျကို စောစောကပငျ ကှယျရာသို့ ချေါထားရနျ အမကေို့မှာထားရသညျ။ခါတိုငျးဆိုလြှငျ သညျကလေးတှေ သံယောဇဉျကွောငျ့ ကြှနျမ ဘယျမှမသှားဖွဈ၊ ခုတော့ သားရေး သမီးရေးထကျ အရေးကွီးတာကွောငျ့ ကြှနျမမောငျ့နောကျသို့ လိုကျခဲ့ပါပွီ။
ဘတျဈကားကို မညညျးမညူမောငျနှငျ့ရငျဘောငျတနျးပီး တိုးဝှတေ့ကျသညျ။ နပေူသော ကုနျးကွောငျးလမျးတှငျ ခါတိုငျးလိုမောငျ့ကိုရနျမထောငျပဲ အားတငျးပီးလြှောကျသညျ။
” မောငျ့မိနျးမကတော့ တျောတျောတိုးတကျလာပွီ ခံနိုငျရညျရှိလာပီပဲ။ အလငျြကလို မညညျးညူတော့ပါလား ” ဟုမောငျက ကြှနျမကို ကွညျ့ပွီးပွောသညျ။ ” တိုးတကျရမယျ မောငျရဲ့ တိုးတကျရမယျ တိုးမတကျရငျကနျြခဲ့မယျ မဟုတျလား ” မောငျကသဘောကစြှာရယျသညျ။ ” ခုတလော မိအမူအရာတှသေိပျထူးခွားတာပဲ ” ဟုလညျးဆိုသညျ။ ကြှနျမကတော့ ကြှနျမစိတျကူးနှငျ့ ကြှနျမ။
” မောငျရမေခြိုးသေးဘူးလား ” အိပျရာမှထပီး မကျြနှာမသဈသေးပဲ သတငျးစာဖတျနသေော မောငျ့ကိုကြှနျမကပွောလိုကျသညျ။ မောငျကကြှနျမကိုလှညျ့ကွညျ့ပီး မကျြလုံးပွူးသှားသညျ။
” ဘယျနှယျ့ မိက အိမျနရေငျးပွငျဆငျထားလိုကျတာ ကွော့လို့ မိစိတျမှကောငျးသေးရဲ့လားခုတလော ” ” ကွညျ့ပွောရော့မယျ ဒီနေ့ တနင်ျဂနှလေေ ” ” အဲ့ဒါဘာဖွဈလဲ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ယောကျြားအိမျပွငျမထှကျရအောငျ ပွုပွုပွငျပွငျနရေမယျလို့ မိရဲ့စာအုပျကွီးကမြားဆိုထားသလား ” မောငျကကြှနျမဖတျနသေော ” သငျ့ယောကျြားကို အိမျခငျအောငျထားနညျး ” ဟူသောစာအုပျကိုရညျရှယျပွောလိုကျခွငျးဖွဈပါသညျ။
” မောငျကိုတော့ အိမျပွငျမထှကျအောငျ ဘယျဒဝေစ်ဆရာကမှ တားနိုငျမှာမဟုတျဘူး မောငျထှကျတဲ့ဆီ မိလိုကျနိုငျအောငျသာအသငျ့ လုပျထားတာသိပလား ” ” ရော့ ခကျပဲခကျလှခညျြ့ နပေါဦး မောငျကဘယျကိုသှားမှာမို့ မိကဘယျကိုလိုကျမှာလဲ ” ” ဘယျပဲဖွဈဖွဈပေါ့ မောငျကသှားမှာအမှနျပဲမဟုတျလား အဲ့တော့မောငျသှားတဲ့နရောကို မိလိုကျမှာပေါ့လို့ ဘာလဲ မလိုကျစခေငျြဘူးလား ”
ကြှနျမက စိတျဆိုးစပွုလာပွီမို့ ရနျတှလေို့ကျပါသညျ။ ” ဒီမှာ မရှမေိ ခုသှားတဲ့နရောက မငျးလိုကျလို့ ဘယျလိုမှမဖွဈဘူးသိရဲ့လား ” ” မိလိုကျလို့မဖွဈရအောငျ မောငျကဘယျကိုသှားမှာမို့လဲ မိနျးမကိုချေါလို့မဖွဈတဲ့နရော မောငျ့မှာရှိနပေီလား ” ပွောရငျးမှ ကြှနျမဝမျးနညျးလာပါသညျ။
မောငျကသတငျးစာကို စားပှဲပျေါပဈတငျရငျး ပွောပွောဆိုဆို ထသှားပါတော့သညျ။ ” ရှိတယျဟေ့ ရှိတယျ တို့သူငယျခငျြးတှစေုပွီး ဘီယာသှားသောကျကွမလို့ကှ၊ မငျးလိုကျခငျြရငျ ဖနျခှကျတဈလုံးပါ ဆှဲခဲ့ပတေော့ ကဲ ”
တဈကယျတော့ ကြှနျမအမူအရာမြားက မောငျ့အတှကျ အထူးအဆနျးဖွဈမညျဆိုလြှငျ ဖွဈစရာပါ။ အဖွဈကတော့ ဒီလိုပါ။ ကြှနျမတို့အိမျတှငျ မောငျ့အပေါငျးအသငျးမြား အဝငျအထှကျမြားလှသညျ။ မောငျမသှားလြှငျ သူတို့လာသညျ။ သူတို့မလာလြှငျ မောငျက သှားသညျ။ ရုံးဆငျးခြိနျလညျးမနရေ ညဦးပိုငျးလဲမအားရ။ မောငျသညျအပေါငျးအသငျးအလှနျခငျသညျ။
မောငျ့အပေါငျးအသငျးအားလုံးလိုလို ကြှနျမသိသညျ။ သူတို့မိနျးမမြားကိုတော့ သိပျမမွငျဖူးပေ။။ ကြှနျမလိုပဲ အိမျတှငျးပုနျးမြားဖွဈဟနျတူသညျ။ ကြှနျမကလညျး အထူးမရှိလြှငျ မညျသညျ့အိမျမှလိုကျသှားပီး မိတျမဖှဲ့တတျပါ။ သို့သျော ကြှနျမထံလာလညျလြှငျမူ ကြှနျမအလှနျပြျောပါသညျ။
တဈနတှေ့ငျမောငျ့သူငယျခငျြး ကိုခမျြးမွတဈယောကျလာလညျသညျ။ သူ့မိနျးမပါချေါလာသဖွငျ့ ကြှနျမကပြာပြာသလဲ ဆီးကွိုမိသညျ။ ခါတိုငျးဆိုလြှငျတော့ သူတို့ယောကျြားနှငျ့ စကားပွောနလြှေငျ ကြှေးစရာရှိက ခကြှေးပွီး ကြှနျမလုပျစရာရှိတာာသာ လုပျတတျနပေါသညျ။
စကားဝိုငျးဖှဲ့ပွောခွငျးမရှိပါ။ သညျတဈခါတော့အမြိုးသမီးပါ ပါလာသဖွငျ့ ကြှနျမပါ ဝငျထိုငျလိုကျရပါသညျ။ ကြှနျမက ဖျောရှသေောအပွုံးနှငျ့ အမြိုးသမီးကို စတငျပွောပါသညျ။ သို့သျော သူမပွုံးပုံက မဝံ့မရဲ။
” သွျော ကလေးတှေ အိမျမှာထားခဲ့ရတာပေါ့နျော ဟငျးဟငျး ” ကြှနျမက စကားမရှိစကားရှာ ပွောရသညျ။ ” ဟုတျကဲ့ ခငျဗြ ” ဝငျပွောသူက ကိုခမျြးမွ။ အမြိုးသမီးက မတုနျမလှုပျ။ ဘယျနှယျ့အမြိုးသမီးပါလိမျ့။
သူလညျးငါ့လိုပဲ စကားနညျးလို့ထငျပါရဲ့။ သူ့ကွညျ့ရတာ အထကျတနျးလှာကနဲ့ တူပါရဲ့။ ရုပျကလညျး ကလေးနှဈယောကျအမသောဆိုတယျ မကသြေးဘူး။ လှတုနျး။ မာနတော့ ကွီးပုံပဲ။ ဒါကွောငျ့သာ စကားမပွောတာပေါ့။
ကြှနျမတို့ အိမျထောငျရှငျမိနျးမခငျြးတှလြေှ့ငျစကားမရှိစကားရှာ ပွောမကုနျအောငျရှိရတတျသညျ။ ကုနျဈေးနှုနျးကွီးကွောငျး၊ ကလေးတှဆေိုး ကွောငျး၊ လငျတျောမောငျတှအေကွောငျး ၊ ယောက်ခမ မကောငျးကွောငျး၊ သောငျးပွောငျးထှလော စုံလှစှာသညျ။
သို့သျော သညျအမြိုးသမီး ကတော့ ဒါတှကေို အောကျတနျးစားအလုပျတှလေို့ ထငျနသေလားမသိ။ လဲ့လဲ့သာပွုံးပီး ပုံ့ပုံ့လေးသာထိုငျနသေညျ။
နောကျတဈလခနျ့အကွာတှငျ သူတို့စုံတှဲရောကျလာပွနျသညျ။ အခြိနျကညနစေောငျးနပေီ။ သူတို့မှာလဲ အထုပျအပိုးတှနှေငျ့ဖွဈသညျ။ ” နကျဖနျတောငျကွီးသှားမလို့ဗြာ မနကျစောစောဘူတာဆငျးရမှာမို့ လာအိပျတာပဲဗြို့ ဘူတာမှာလဲ အိပျလို့မရဘူးလေ ” ကိုခမျြးမွကအားတောငျ့အားနာဟနျဖွငျ့ ပွောသညျ။
ကြှနျမတို့အိမျက ဘူတာနှငျ့နီးသညျမို့ ကြှနျမကွညျကွညျဖွူဖွူ လကျခံလိုကျရသညျ။ ” အို အားမနာပါနဲ့ ဒီမှာအိပျလို့ဖွဈပါတယျ ”
ပွောသာပွောရသညျ။ သူစိမျးအတှကျ အိပျရာ ခွငျထောငျအပိုမရှိသောကြှနျမတို့မှာ အတျောအကပျြရိုကျသှားခဲ့ရသညျ။ နောကျဆုံးတော့ ကြှနျမတို့ကုတငျပျေါမှာ သူတို့အိပျ၊ ကလေးတှကေို သူ့အဘှားခွငျထောငျထဲသှငျးပွီး ခေါငျးအုနျးတဈလုံး ဖြာတဈခပျြနှငျ့ ကြှနျမတို့ နှဈယောကျဖွဈသလို အိပျလိုကျရသညျ။
ကိုခမျြးမွတို့ လငျမယားကဖွငျ့ ညားခါစ ဇနီးမောငျနှံအလား စကားတတှတျတှတျနှငျ့ ရှငျရှငျမွူးမွူးဖွဈနကွေပုံရညျ။ တို့လဲ ကလေးတှထေားခဲ့ပီး တဈခါလောကျ ခရီးထှကျရရငျ ကောငျးမှာပဲဟု သူတို့ကို အားကကြာ တှေးမိသေးသညျ။
သညျတဈခါတော့ ကိုခမျြးမွဇနီးကက ဖျောဖျောရှရှေေ စကားပွောဖျောရလာသညျ။ အိပျရာမဝငျမီ ဆီခကျြ ထှကျဝယျကာ ကြှနျမတို့ တဈအိမျသားလုံးကို ကြှေးသညျ။ နံနကျ စောစောအလငျးရောငျမထှကျမီ သူတို့ထသှားကွရာ သူတို့အိပျရာကို ကြှနျမကပငျသိမျးလိုကျရသညျ။
” သူတို့က တောငျကွီးကို ဘာသှားလုပျကွတာလဲမောငျ ” ” ကိုခမျြးမွက မှောငျခိုကူးနတေယျ ” ” သွျော ဒီလူနှယျ မှောငျခိုကုနျကူးတာမြား မယားငယျငယျခြောခြောလေးကို ချေါသှားရကျတယျနျော ” မောငျကတော့ သူ့သူငယျခငျြးအတှကျ ခပျမဆိတျသာနပေါလသေညျ။
” သမီးရေ ဒီမှာ ဧညျ့သညျလာနတေယျ ” အမအေ့သံကွားသဖွငျ့ အိမျရှလှေ့မျးကွညျ့လိုကျရာ အမြိုးသမီးဖွဈနလေို့ အပွေးထှကျသှားမိသညျ။ မောငျရုံးသှားနခေိုကျဖွဈလို့ အိမျတှငျမရှိပေ။
” ဒီအိမျက ကိုမွငျ့နိုငျတို့အိမျ ဟုတျပါလားရှငျ ” ” ဟုတျပါတယျ ဟုတျပါတယျ ထိုငျပါအုနျးရှငျ ” အမြိုးသမီးပုံက နှမျးလလြှသညျ။ ညိုးငယျပီးငိုတော့မလိုဖွဈနသေညျ ။ အရှယျကလဲ ကြှနျမထကျကွီးပုံရသညျ။ သူမက ကြှနျမဖိတျချေါခကျြကို အသာအယာခေါငျးယမျးပွသညျ။
” နပေါစရှေငျ မထိုငျတော့ပါဘူး ကိုမွငျ့နိုငျသူငယျခငျြးကိုခမျြးမွတဈယောကျ ဒီကိုလာသလားလို့ပါ ” ” ကိုခမျြးမွဟုတျလား ဟိုတလောကတော့လာတယျရှငျ့ နောကျထပျမလာပါဘူး ဘာဖွဈလို့လဲ ” ” သွျော သူအိမျပွနျမလာတာ လေးငါးဆယျရကျရှိနပွေီမို့ပါ ” ” ရှငျ…. ဒီကကိုခမျြးမွနဲ့ ဘာတျောပါသလဲ ” ” ကြှနျမက သူ့မိနျးမပါ ” မွတျစှာဘုရား။ ကြှနျမခေါငျးသညျ ခြာလပတျလညျသှားပါသညျ။ တံခါးကိုလဲ လကျဖွငျ့ တငျးတငျးဆုပျလိုကျမိသညျ။
” သွျော အငျးအငျး ဟုတျကဲ့ဟုတျကဲ့ ” ” သူတောငျကွီးသှားတာကွာလို့ လာမေးကွညျ့တာပါ၊ ခါတိုငျး ဒီလောကျမကွာဘူး ပွနျပါဦးမယျ ” ” ကောငျးပါပွီ ကောငျးပါပွီ သူလာရငျပွောပွလိုကျပါ့မယျ အိမျကစိတျပူနတေယျလို့ ”
အငျးကိုခမျြးမွ ကိုခမျြးမွ လူကတော့ မခမျြးမွပါကလား။ လကျစသတျတော့ ဟိုအမြိုးသမီးက သူ့မိနျးမမှမဟုတျတာ။ အလိုကျတဲ့ငါနှယျ့။ ဒီလောကျပဲ လူကဲခတျညံ့ရသလား။ ကလေးအမနေဲ့ အပြိုကိုမှ ခှဲခွားလို့မသိဘူးလား။ အအုံးဟဲ့ ထုံအုံးဟဲ့ အမူအရာကိုကွညျ့တာနဲ့မှ အဖွဈမှနျကို မရိပျမိဘူးလား၊ မသိဘူးလား။
နငျဒီလို အပုံမြိုးနဲ့ နငျ့ယောကျြားတော့ နငျ့ကိုပဈသှားတော့မှာပဲ။ အပွငျလောက ဘာဖွဈလို့ဖွဈမှနျးမသိ။ အိမျတှငျးပုနျးနတေဲ့မိနျးမ။ သညျတဈခါ ခံရပေါ့။ ဟငျး ကိုခမျြးမွတော့လား လာပစေဦေး။
” မောငျ ဒီနေ့ ကိုတငျမောငျဦးတို့အိမျက ဘုရားကိုးဆူဖိတျထားတယျမဟုတျလား ” ” အေးဟုတျသားပဲ မနေ့လေိုကျတာ ” ” မိက အဝတျအစားတောငျ ရှေးထားပီးပီ ” ” ဘာလဲ မိပါလိုကျအုနျးမလို့လား” ” ဒါပေါ့ ဘာလဲမိကို မချေါခငျြပွနျဘူးလား ”
” ချေါခငျြပါသဗြာ၊ မိသဘောပါ မိလိုကျမယျဆိုရငျ သုံးဘီးငှားရဦးမှာပေါ့ ၊ ဒီအဝတျစားတှနေဲ့ ” ” ငှားခငျြလဲငှား မငှားခငျြ ဒီအတိုငျးသှား မောငျ ၊ မိကတော့ လိုကျမှာပဲ ” ” သွျော လိုကျပါ ပွောနမှေပဲ၊ လိုကျလိုကျ တကတဲ သူ့မှာ ဘာဖွဈနတေယျမသိဘူး၊ သှားလရော တကောကျကောကျလိုကျနတေော့တာပဲ ”
” လိုကျရမယျမောငျရေ၊ လိုကျရမယျ၊ မောငျတို့ယောကြာင်ျးတှကေ လိုကျနိုငျမှ တနျကာကတြာ၊ အိမျတှငျးမှုအလုပျ သိမျးထုပျသခြောနရေုံနဲ့ မပွီးသေးဘူး၊ မောငျတို့ရဲ့အလိမျအညာအလှညျ့အပတျ မခံရအောငျ နှံ့စပျအောငျသိထားမှနားလညျထားမှ ” ကြှနျမက အဝတျအစားလဲရငျး ပါးစပျမှ တတှတျတှတျပွောနမေိသညျ။
” ကဲ မရှမေိ စကားမရှညျနဲ့ပွီးရငျသှားမယျ ” ကြှနျမပွငျဆငျလို့မှ စိတျတိုငျးမကသြေးခငျ မောငျကပွောပွောဆိုဆိုရှမှေ့ဆငျးသှားနှငျ့သဖွငျ့ မနကေ့မှရှေးထားသော ဒေါကျဖိနပျဖွူဖွူဖှေးဖှေး အသဈစကျစကျလေးကို ကိုငျတဲ့ကာ အပွေးအလှားဆငျးလိုကျလာခဲ့ရပါသညျ။
ကိုငျးးးး ဒီတဈခါကြှနျမသာလြှငျ မယားအစဈဖွဈပါကွောငျး ပွညျပျေါမှာ ရှကွေျောငွာထုတျနိုငျဖို့ နောကျတျောပါးမှ တဈဖဝါးမခှာ လိုကျပါတျောမူရော့မယျ၊ ဗိနျးဗောငျးနဲ့ပို့စမျးပါ ရှာစားရေ့။
မိုးမိုး – အငျးလြား (တိုငျးရငျးမေ ။ ။ ၁၊၁၀၊၁၉၇၄)
” ဒါက ဘယ်သွားမလို့လဲ မောင် ” ” သြော် ထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အာလာပ သလ္လာပ သတင်းချင်းဖလှယ်ရအောင် အာလူးပေးရအောင်ပေါ့ကွာ ထွက်လိုက်ဦးမလေ ” ” သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘယ်မှာချိန်းထားလို့လဲ ” ” အုန်းမောင်တို့ အိမ်မှာလေကွာ ” ” မိလဲ လိုက်မယ်လေ ” ” အင် မိက ဘာလို့လိုက်မှာလဲ ”
” အို မောင်က ရုံးအားရက်ကလေး တစ်ရက်တစ်လေ အိမ်မှာမနေတော့ မိလဲလိုက်ချင်တာပေါ့ မောင်ရုံးသွားလဲ အိမ်မှာ မိတစ်ယောက်ထဲ မောင်ရုံးပိတ်တော့လဲ အိမ်မှာ မိတစ်ယောက်ထဲ ကြာတော့ အိမ်မှာနေရတာ ငြီးငွေ့တာပေါ့လို့ ” ” ကဲကဲ လိုက်ချင်လဲ လိုက်ခဲ့ပါဗျာ မသိပါဘူး ခါတိုင်းတော့ မိကဘယ်ခေါ်ခေါ်မရတော့ ဒီကနေ့မှ ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာဖြစ်တာလဲလို့ ” ” အို နောက်ဆို မောင်ဘယ်သွားသွားလိုက်ခဲ့မယ်မောင်ရဲ့ ခေါ်သာခေါ် ”
အဝတ်အစားအပြေးအလွှားသွားလဲနေတဲ့ ကျွန်မကိုမောင်ကနားမလည်စွာ ပြန်ကြည့်နေပါသည်။ မောင်နှင့်ကျွန်မ အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည့် လေးနှစ်တာကာလပတ်လုံး ကျွန်မသည် မောင်နှင့်အတူအပြင်ထွက်ခဲလှပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ရုပ်ရှင်နှင့် လဟာပြင်ဈေးလောက်တွင်သာ အတူသွားလေ့ရှိပါသည်။ မောင့်မှာမူ ခြေထောက်တွင် ဗွေပါသလားဆိုရအောင်အောင် ခဏလေးမှ အနားမနေ အပြင်သွားနေရမှ ကျေနပ်သူဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မကလဲ အပြင်ထွက်ရမှာ ကရိကထများလွန်းလို့ မောင်ခေါ်တိုင်း ရှောရှောရှူရှူဘယ်တော့မှမလိုက်။ အိမ်အလုပ်တွေရှိသေးသည်။ ဘတ်စ်ကားစီးရမှာ စိတ်ပျက်သည် အဝတ်အစားကောင်းကောင်းမရှိဘဲ စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးငြင်းပယ်တတ်သည်။ ယခုတော့ ကျွန်မအကြောင်းနှင့်ကျွန်မမို့ လိုက်မှ လိုက်မှ။
” ကဲ မိရွှေမိ အဲ့ဒါကိုအုန်းမောင်တို့အမေပဲ စကားပြောနေချေ ပျင်းရင်လဲ စာအုပ်တွေကြည့် မောင်တို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားလိုက်ဦးမယ် ”
အပေါင်းအသင်းနှင့်တွေ့လျှင် မယားပါမေ့တတ်သော မောင်က အပြင်ထွက်ရန် ဟန်ပြင်ပါသည်။ ကိုအုန်းမောင်တို့အမေကလဲ ကျွန်မကိုဖော်ရွေစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
” ဒီက သမီးကို တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသေးဘူး ” ” ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မက ကိုမြင့်နိုင် မိန်းမပါ ဒေါ်လေး ဟင်းဟင်း ” အပြင်ထွက်ရန် ဟန်ပြင်နေသော မောင်က ကျွန်မကိုမျက်လုံးတစ်ချက် ဝင့်ကြည့်သည်။ သူနှင့်အတူလိုက်လာမှတော့ သူ့မိန်းမမှန်းပြောပြ နေစရာမလိုပါပဲ ကျွန်မက မောင့်မိန်းမပါဟု ပြောနေသည်ကို အံ့သြသွားပုံရသည်။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကျွန်မ။
” တနင်္ဂနွေလေး တစ်နေ့တစ်လေများ အိမ်မှာနေပါအုန်းလားမောင်ရယ် ခုဘယ်သွားဦးမလို့လဲ ” ” ကိုစံဝင်းတို့အိမ်က ထမင်းစားဖိတ်ထားလို့ကွ ထမင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး မုန့်ဟင်းခါး အပျော်ချက်စားကြမှာပါ ” ” အိမ်မှာချက်တဲ့မုန့်ဟင်းခါးဆိုတော့ စားလို့ကောင်းမှာပဲ သူတို့ကလဲပဲ မောင်တစ်ယောက်တည်းဖိတ်ရသလားလို့ ” ” နှစ်ယောက်စလုံးကိုဖိတ်ပါတယ်ကွာ မောင်ကမိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး တစ်ယောက်ထဲပဲလာခဲ့မယ်လို့ ပြောခဲ့တာပါ ”
” အိုမောင်ကလဲ မိကိုပါဖိတ်ရင် မိလိုက်မှာပေါ့လို့ သူတို့အိမ်လဲမရောက်တာကြာပြီ သူမိန်းမရပီးမှတစ်ခါမှ မရောက်လို့ သူ့မိန်းမတောင် မိကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူး မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကပဲ ခဏမြင်လိုက်ရတာ ” ” မိက မိကိုယ်မိ မောင့်မိန်းမမှန်း သိပ်သိစေချင်တယ်ပေါ့ ” ” အမယ် မဟုတ်ပါဘူး သူ့ကို မိမမြင်သေးဖူးတာကို ပြောတာပါ ” ” ကဲ လိုက်ချင်ရင်လဲမြန်မြန်လုပ်ချေကွာ ” ” ခဏလေးပါ မောင်ရဲ့ ခဏလေး ”
သည်တစ်ခါတော့ တနင်္ဂနွေနေ့မောင်အပြင်ထွက်လျှင် အသင့်လိုက်နိုင်ရန် ကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသော အဝတ်အစားများကို အမြန်ဆုံးဝတ်ပီး ထွက်လာနိုင်သည်။ သားနှင့်သမီးတို့မှာ အဘွားဖြစ်သူနှင့် ဆော့ကစားနေကြသည်။
သမီးငယ်ကို စောစောကပင် ကွယ်ရာသို့ ခေါ်ထားရန် အမေ့ကိုမှာထားရသည်။ခါတိုင်းဆိုလျှင် သည်ကလေးတွေ သံယောဇဉ်ကြောင့် ကျွန်မ ဘယ်မှမသွားဖြစ်၊ ခုတော့ သားရေး သမီးရေးထက် အရေးကြီးတာကြောင့် ကျွန်မမောင့်နောက်သို့ လိုက်ခဲ့ပါပြီ။
ဘတ်စ်ကားကို မညည်းမညူမောင်နှင့်ရင်ဘောင်တန်းပီး တိုးဝှေ့တက်သည်။ နေပူသော ကုန်းကြောင်းလမ်းတွင် ခါတိုင်းလိုမောင့်ကိုရန်မထောင်ပဲ အားတင်းပီးလျှောက်သည်။
” မောင့်မိန်းမကတော့ တော်တော်တိုးတက်လာပြီ ခံနိုင်ရည်ရှိလာပီပဲ။ အလျင်ကလို မညည်းညူတော့ပါလား ” ဟုမောင်က ကျွန်မကို ကြည့်ပြီးပြောသည်။ ” တိုးတက်ရမယ် မောင်ရဲ့ တိုးတက်ရမယ် တိုးမတက်ရင်ကျန်ခဲ့မယ် မဟုတ်လား ” မောင်ကသဘောကျစွာရယ်သည်။ ” ခုတလော မိအမူအရာတွေသိပ်ထူးခြားတာပဲ ” ဟုလည်းဆိုသည်။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မစိတ်ကူးနှင့် ကျွန်မ။
” မောင်ရေမချိုးသေးဘူးလား ” အိပ်ရာမှထပီး မျက်နှာမသစ်သေးပဲ သတင်းစာဖတ်နေသော မောင့်ကိုကျွန်မကပြောလိုက်သည်။ မောင်ကကျွန်မကိုလှည့်ကြည့်ပီး မျက်လုံးပြူးသွားသည်။
” ဘယ်နှယ့် မိက အိမ်နေရင်းပြင်ဆင်ထားလိုက်တာ ကြော့လို့ မိစိတ်မှကောင်းသေးရဲ့လားခုတလော ” ” ကြည့်ပြောရော့မယ် ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေလေ ” ” အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ယောကျာ်းအိမ်ပြင်မထွက်ရအောင် ပြုပြုပြင်ပြင်နေရမယ်လို့ မိရဲ့စာအုပ်ကြီးကများဆိုထားသလား ” မောင်ကကျွန်မဖတ်နေသော ” သင့်ယောကျာ်းကို အိမ်ခင်အောင်ထားနည်း ” ဟူသောစာအုပ်ကိုရည်ရွယ်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
” မောင်ကိုတော့ အိမ်ပြင်မထွက်အောင် ဘယ်ဒေဝစ္ဆရာကမှ တားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး မောင်ထွက်တဲ့ဆီ မိလိုက်နိုင်အောင်သာအသင့် လုပ်ထားတာသိပလား ” ” ရော့ ခက်ပဲခက်လှချည့် နေပါဦး မောင်ကဘယ်ကိုသွားမှာမို့ မိကဘယ်ကိုလိုက်မှာလဲ ” ” ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ မောင်ကသွားမှာအမှန်ပဲမဟုတ်လား အဲ့တော့မောင်သွားတဲ့နေရာကို မိလိုက်မှာပေါ့လို့ ဘာလဲ မလိုက်စေချင်ဘူးလား ”
ကျွန်မက စိတ်ဆိုးစပြုလာပြီမို့ ရန်တွေ့လိုက်ပါသည်။ ” ဒီမှာ မရွှေမိ ခုသွားတဲ့နေရာက မင်းလိုက်လို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးသိရဲ့လား ” ” မိလိုက်လို့မဖြစ်ရအောင် မောင်ကဘယ်ကိုသွားမှာမို့လဲ မိန်းမကိုခေါ်လို့မဖြစ်တဲ့နေရာ မောင့်မှာရှိနေပီလား ” ပြောရင်းမှ ကျွန်မဝမ်းနည်းလာပါသည်။
မောင်ကသတင်းစာကို စားပွဲပေါ်ပစ်တင်ရင်း ပြောပြောဆိုဆို ထသွားပါတော့သည်။ ” ရှိတယ်ဟေ့ ရှိတယ် တို့သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ဘီယာသွားသောက်ကြမလို့ကွ၊ မင်းလိုက်ချင်ရင် ဖန်ခွက်တစ်လုံးပါ ဆွဲခဲ့ပေတော့ ကဲ ”
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်မအမူအရာများက မောင့်အတွက် အထူးအဆန်းဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ဖြစ်စရာပါ။ အဖြစ်ကတော့ ဒီလိုပါ။ ကျွန်မတို့အိမ်တွင် မောင့်အပေါင်းအသင်းများ အဝင်အထွက်များလှသည်။ မောင်မသွားလျှင် သူတို့လာသည်။ သူတို့မလာလျှင် မောင်က သွားသည်။ ရုံးဆင်းချိန်လည်းမနေရ ညဦးပိုင်းလဲမအားရ။ မောင်သည်အပေါင်းအသင်းအလွန်ခင်သည်။
မောင့်အပေါင်းအသင်းအားလုံးလိုလို ကျွန်မသိသည်။ သူတို့မိန်းမများကိုတော့ သိပ်မမြင်ဖူးပေ။။ ကျွန်မလိုပဲ အိမ်တွင်းပုန်းများဖြစ်ဟန်တူသည်။ ကျွန်မကလည်း အထူးမရှိလျှင် မည်သည့်အိမ်မှလိုက်သွားပီး မိတ်မဖွဲ့တတ်ပါ။ သို့သော် ကျွန်မထံလာလည်လျှင်မူ ကျွန်မအလွန်ပျော်ပါသည်။
တစ်နေ့တွင်မောင့်သူငယ်ချင်း ကိုချမ်းမြတစ်ယောက်လာလည်သည်။ သူ့မိန်းမပါခေါ်လာသဖြင့် ကျွန်မကပျာပျာသလဲ ဆီးကြိုမိသည်။ ခါတိုင်းဆိုလျှင်တော့ သူတို့ယောကျာ်းနှင့် စကားပြောနေလျှင် ကျွေးစရာရှိက ချကျွေးပြီး ကျွန်မလုပ်စရာရှိတာာသာ လုပ်တတ်နေပါသည်။
စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောခြင်းမရှိပါ။ သည်တစ်ခါတော့အမျိုးသမီးပါ ပါလာသဖြင့် ကျွန်မပါ ဝင်ထိုင်လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်မက ဖော်ရွေသောအပြုံးနှင့် အမျိုးသမီးကို စတင်ပြောပါသည်။ သို့သော် သူမပြုံးပုံက မဝံ့မရဲ။
” သြော် ကလေးတွေ အိမ်မှာထားခဲ့ရတာပေါ့နော် ဟင်းဟင်း ” ကျွန်မက စကားမရှိစကားရှာ ပြောရသည်။ ” ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ ” ဝင်ပြောသူက ကိုချမ်းမြ။ အမျိုးသမီးက မတုန်မလှုပ်။ ဘယ်နှယ့်အမျိုးသမီးပါလိမ့်။
သူလည်းငါ့လိုပဲ စကားနည်းလို့ထင်ပါရဲ့။ သူ့ကြည့်ရတာ အထက်တန်းလွှာကနဲ့ တူပါရဲ့။ ရုပ်ကလည်း ကလေးနှစ်ယောက်အမေသာဆိုတယ် မကျသေးဘူး။ လှတုန်း။ မာနတော့ ကြီးပုံပဲ။ ဒါကြောင့်သာ စကားမပြောတာပေါ့။
ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်ရှင်မိန်းမချင်းတွေ့လျှင်စကားမရှိစကားရှာ ပြောမကုန်အောင်ရှိရတတ်သည်။ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးကြောင်း၊ ကလေးတွေဆိုး ကြောင်း၊ လင်တော်မောင်တွေအကြောင်း ၊ ယောက္ခမ မကောင်းကြောင်း၊ သောင်းပြောင်းထွေလာ စုံလှစွာသည်။
သို့သော် သည်အမျိုးသမီး ကတော့ ဒါတွေကို အောက်တန်းစားအလုပ်တွေလို့ ထင်နေသလားမသိ။ လဲ့လဲ့သာပြုံးပီး ပုံ့ပုံ့လေးသာထိုင်နေသည်။
နောက်တစ်လခန့်အကြာတွင် သူတို့စုံတွဲရောက်လာပြန်သည်။ အချိန်ကညနေစောင်းနေပီ။ သူတို့မှာလဲ အထုပ်အပိုးတွေနှင့်ဖြစ်သည်။ ” နက်ဖန်တောင်ကြီးသွားမလို့ဗျာ မနက်စောစောဘူတာဆင်းရမှာမို့ လာအိပ်တာပဲဗျို့ ဘူတာမှာလဲ အိပ်လို့မရဘူးလေ ” ကိုချမ်းမြကအားတောင့်အားနာဟန်ဖြင့် ပြောသည်။
ကျွန်မတို့အိမ်က ဘူတာနှင့်နီးသည်မို့ ကျွန်မကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံလိုက်ရသည်။ ” အို အားမနာပါနဲ့ ဒီမှာအိပ်လို့ဖြစ်ပါတယ် ”
ပြောသာပြောရသည်။ သူစိမ်းအတွက် အိပ်ရာ ခြင်ထောင်အပိုမရှိသောကျွန်မတို့မှာ အတော်အကျပ်ရိုက်သွားခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မတို့ကုတင်ပေါ်မှာ သူတို့အိပ်၊ ကလေးတွေကို သူ့အဘွားခြင်ထောင်ထဲသွင်းပြီး ခေါင်းအုန်းတစ်လုံး ဖျာတစ်ချပ်နှင့် ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ဖြစ်သလို အိပ်လိုက်ရသည်။
ကိုချမ်းမြတို့ လင်မယားကဖြင့် ညားခါစ ဇနီးမောင်နှံအလား စကားတတွတ်တွတ်နှင့် ရွှင်ရွှင်မြူးမြူးဖြစ်နေကြပုံရည်။ တို့လဲ ကလေးတွေထားခဲ့ပီး တစ်ခါလောက် ခရီးထွက်ရရင် ကောင်းမှာပဲဟု သူတို့ကို အားကျကာ တွေးမိသေးသည်။
သည်တစ်ခါတော့ ကိုချမ်းမြဇနီးကက ဖော်ဖော်ရွေရွေ စကားပြောဖော်ရလာသည်။ အိပ်ရာမဝင်မီ ဆီချက် ထွက်ဝယ်ကာ ကျွန်မတို့ တစ်အိမ်သားလုံးကို ကျွေးသည်။ နံနက် စောစောအလင်းရောင်မထွက်မီ သူတို့ထသွားကြရာ သူတို့အိပ်ရာကို ကျွန်မကပင်သိမ်းလိုက်ရသည်။
” သူတို့က တောင်ကြီးကို ဘာသွားလုပ်ကြတာလဲမောင် ” ” ကိုချမ်းမြက မှောင်ခိုကူးနေတယ် ” ” သြော် ဒီလူနှယ် မှောင်ခိုကုန်ကူးတာများ မယားငယ်ငယ်ချောချောလေးကို ခေါ်သွားရက်တယ်နော် ” မောင်ကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းအတွက် ခပ်မဆိတ်သာနေပါလေသည်။
” သမီးရေ ဒီမှာ ဧည့်သည်လာနေတယ် ” အမေ့အသံကြားသဖြင့် အိမ်ရှေ့လှမ်းကြည့်လိုက်ရာ အမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့ အပြေးထွက်သွားမိသည်။ မောင်ရုံးသွားနေခိုက်ဖြစ်လို့ အိမ်တွင်မရှိပေ။
” ဒီအိမ်က ကိုမြင့်နိုင်တို့အိမ် ဟုတ်ပါလားရှင် ” ” ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ထိုင်ပါအုန်းရှင် ” အမျိုးသမီးပုံက နွမ်းလျလှသည်။ ညိုးငယ်ပီးငိုတော့မလိုဖြစ်နေသည် ။ အရွယ်ကလဲ ကျွန်မထက်ကြီးပုံရသည်။ သူမက ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချက်ကို အသာအယာခေါင်းယမ်းပြသည်။
” နေပါစေရှင် မထိုင်တော့ပါဘူး ကိုမြင့်နိုင်သူငယ်ချင်းကိုချမ်းမြတစ်ယောက် ဒီကိုလာသလားလို့ပါ ” ” ကိုချမ်းမြဟုတ်လား ဟိုတလောကတော့လာတယ်ရှင့် နောက်ထပ်မလာပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲ ” ” သြော် သူအိမ်ပြန်မလာတာ လေးငါးဆယ်ရက်ရှိနေပြီမို့ပါ ” ” ရှင်…. ဒီကကိုချမ်းမြနဲ့ ဘာတော်ပါသလဲ ” ” ကျွန်မက သူ့မိန်းမပါ ” မြတ်စွာဘုရား။ ကျွန်မခေါင်းသည် ချာလပတ်လည်သွားပါသည်။ တံခါးကိုလဲ လက်ဖြင့် တင်းတင်းဆုပ်လိုက်မိသည်။
” သြော် အင်းအင်း ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ” ” သူတောင်ကြီးသွားတာကြာလို့ လာမေးကြည့်တာပါ၊ ခါတိုင်း ဒီလောက်မကြာဘူး ပြန်ပါဦးမယ် ” ” ကောင်းပါပြီ ကောင်းပါပြီ သူလာရင်ပြောပြလိုက်ပါ့မယ် အိမ်ကစိတ်ပူနေတယ်လို့ ”
အင်းကိုချမ်းမြ ကိုချမ်းမြ လူကတော့ မချမ်းမြပါကလား။ လက်စသတ်တော့ ဟိုအမျိုးသမီးက သူ့မိန်းမမှမဟုတ်တာ။ အလိုက်တဲ့ငါနှယ့်။ ဒီလောက်ပဲ လူကဲခတ်ညံ့ရသလား။ ကလေးအမေနဲ့ အပျိုကိုမှ ခွဲခြားလို့မသိဘူးလား။ အအုံးဟဲ့ ထုံအုံးဟဲ့ အမူအရာကိုကြည့်တာနဲ့မှ အဖြစ်မှန်ကို မရိပ်မိဘူးလား၊ မသိဘူးလား။
နင်ဒီလို အပုံမျိုးနဲ့ နင့်ယောကျာ်းတော့ နင့်ကိုပစ်သွားတော့မှာပဲ။ အပြင်လောက ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိ။ အိမ်တွင်းပုန်းနေတဲ့မိန်းမ။ သည်တစ်ခါ ခံရပေါ့။ ဟင်း ကိုချမ်းမြတော့လား လာပေစေဦး။
” မောင် ဒီနေ့ ကိုတင်မောင်ဦးတို့အိမ်က ဘုရားကိုးဆူဖိတ်ထားတယ်မဟုတ်လား ” ” အေးဟုတ်သားပဲ မေ့နေလိုက်တာ ” ” မိက အဝတ်အစားတောင် ရွေးထားပီးပီ ” ” ဘာလဲ မိပါလိုက်အုန်းမလို့လား” ” ဒါပေါ့ ဘာလဲမိကို မခေါ်ချင်ပြန်ဘူးလား ”
” ခေါ်ချင်ပါသဗျာ၊ မိသဘောပါ မိလိုက်မယ်ဆိုရင် သုံးဘီးငှားရဦးမှာပေါ့ ၊ ဒီအဝတ်စားတွေနဲ့ ” ” ငှားချင်လဲငှား မငှားချင် ဒီအတိုင်းသွား မောင် ၊ မိကတော့ လိုက်မှာပဲ ” ” သြော် လိုက်ပါ ပြောနေမှပဲ၊ လိုက်လိုက် တကတဲ သူ့မှာ ဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူး၊ သွားလေရာ တကောက်ကောက်လိုက်နေတော့တာပဲ ”
” လိုက်ရမယ်မောင်ရေ၊ လိုက်ရမယ်၊ မောင်တို့ယောကျာင်္းတွေက လိုက်နိုင်မှ တန်ကာကျတာ၊ အိမ်တွင်းမှုအလုပ် သိမ်းထုပ်သေချာနေရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး၊ မောင်တို့ရဲ့အလိမ်အညာအလှည့်အပတ် မခံရအောင် နှံ့စပ်အောင်သိထားမှနားလည်ထားမှ ” ကျွန်မက အဝတ်အစားလဲရင်း ပါးစပ်မှ တတွတ်တွတ်ပြောနေမိသည်။
” ကဲ မရွှေမိ စကားမရှည်နဲ့ပြီးရင်သွားမယ် ” ကျွန်မပြင်ဆင်လို့မှ စိတ်တိုင်းမကျသေးခင် မောင်ကပြောပြောဆိုဆိုရှေ့မှဆင်းသွားနှင့်သဖြင့် မနေ့ကမှရွေးထားသော ဒေါက်ဖိနပ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အသစ်စက်စက်လေးကို ကိုင်တဲ့ကာ အပြေးအလွှားဆင်းလိုက်လာခဲ့ရပါသည်။
ကိုင်းးးး ဒီတစ်ခါကျွန်မသာလျှင် မယားအစစ်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြည်ပေါ်မှာ ရွှေကြော်ငြာထုတ်နိုင်ဖို့ နောက်တော်ပါးမှ တစ်ဖဝါးမခွာ လိုက်ပါတော်မူရော့မယ်၊ ဗိန်းဗောင်းနဲ့ပို့စမ်းပါ ရွာစားရေ့။
မိုးမိုး – အင်းလျား (တိုင်းရင်းမေ ။ ။ ၁၊၁၀၊၁၉၇၄)